Ralkap Nih Chinram Hi Fakpi In An Tuk Cang Lai - Chin Eleven News
Ralkap Nih Chinram Hi Fakpi In An Tuk Cang Lai
Ralkap minung tamtuk Mindat peng le Thantlang le Falam ah CD nih an thah hna, caan tlawmpalaruah ah Mindat ah CDF le ralkap caan tlawmpal kah daihnak an tuah i, ralkap nih phung an ser mi an buar hnu in kahnakachuak than.
Ralkap nih Mindat CDF he daihnak an ser mi an buar hnu ah Mindat CDF nih taunai ni 10 chung ah Min Aung hlaing ralkap pawl minung 50 an thah colh hna. Ralkap nihazei ti hmanh in hnu tawlh an timh ti lo caah Mindat ah Helicopter in ralkap thazaang July 30 ah an chap than.
Kahnak kong hi chim ciaahar nainadai lo lo hinak inazual lai tiah ruah khawhasi,aruang cu Nizaan nai ah ralkap minung 50 an thih tik ah ralkap thazaang tampi chap in kahnak hiachuak thluahmah ko cang caahadai ti lai lo tiah zumhasi.
Relchap; Chinram Mindat peng chung Min Aung Hlaing ralhrang pawl le CDF kahdohnak’ July 21 in July 31 tiangah’ ralkapathi mi hi minung 50 leng an si cang tiah Ralhrang lei thawngthanhnak tuanvo ngeitu hna nih an tar.
ချင်းပြည်နယ်တွင် ၈ရက်အတွင်းကြမ်းဖက် စစ်တပ်မှ ၅၀ နီးပါး ကျဆုံးခဲ့ ။July 31. 2021 ; ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့နယ်တွင် ဇူလိုင် ၂၁ မှ ၂၉ ရက် အတွင်း အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နှင့် မင်းတပ် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များ တိုက်ပွဲများအကြိမ်ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှစစ်သား ၅၀ နီးပါး ကျဆုံးခဲ့သည်ဟု စစ်တပ် သတင်းရင်းမြစ်များမှ သိရသည်။ ဇူလိုင် ၂၁ တွင် တိုက်ပွဲတကြိမ်၊ ဇူလိုင် ၂၂ တွင်တကြိမ်၊ ဇူလိုင် ၂ရ ရက်နေ့တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး စစ်သား ၂ ဦးကျဆုံးခဲ့ပြီး ဇူလိုင် ၂၄ ရက်နေ့တွင် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှ နယ်မြေရှင်းလင်းရေး ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဇူလိုင် ၂၅ ရက်နေ့/ ဇူလိုင် ၂၇ ရက်နေ့တွင် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အကြမ်းဖက် စစ်သား ၁၀ ဦး ကျဆုံးခဲ့သည်။ ဇူလိုင် ၂၉ ရက်တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး စစ်တပ်မှ ၄ ဦးကျဆုံးခဲ့ပြန်သည်။ အကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏ အမည်မဖော်လိုသူတာဝန်ရှိသူတဦး ပြောပြချက်အရ မင်းတပ်တိုက်ပွဲများတွင် စစ်ဗိုလ်နှင့်အရာရှိများအပါအဝင် ၅၀ နီးပါးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအတည်ပြု ပြောဆိုထားသည်။ crd-MPA #ချင်းပြည်နယ် #မင်းတပ်
Min Aung Hlaing Ralkap Le An Leittang Pawl Nih Khua An Duah